ပွင့်လင်းအကောင့်အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းညွှန် | အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့် Verify လုပ်နည်း - က ISO
အတော်များများကအရင်ကဆိုရင်ရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့အလေ့အကျင့်လုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့အသိပညာထားရန်လုံလောက်သောယုံကြည်မှုမခံစားရဘူးသူတို့ဒစ်ဂျစ်တယ်အဘယ်အရာကို options များနားလည်သဘောပေါက်ကြပုံပေါ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကုန်သွယ်ရေးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေ။ ထိုသူတို့ကမေးချင်ပါတယ်အကြီးမားဆုံးမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: ဘယ်မှာစတင်ရန်?
ပထမ Demo ကုန်သွယ်ရေး
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသင်နှင့်အတူကုန်သွယ်သွားနေသောပွဲစားကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျအလုပ်မလုပ်သွားကြသည်ရှိရာကန့်နေသောကြောင့် Beginners သည့်ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းများ၏အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။ တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဝက်ဘ်ဘ terminal ကိုသင်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြပြီးမှသာသင်တို့အဘို့သင့်လျော်သည်ဆိုပါကသင်တို့မူကားထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
သငျသညျအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးသည့်အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောက်ပါမေးခွန်းများကိုမေးပါ: ငါဒီ site ကို အသုံးပြု. အဆင်ပြေခံစားရသလဲ အရာအားလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပါသလား? မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများအများကြီးဒေါင်းလုပ်လိုအပ်ပါသလား? ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအရင်ကဆိုရင်များအတွက်အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ခြို့သောအချိန်များအတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးနောက်သူတို့လုံးဝသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကုန်သွယ်ရေးဖြစ်စေခြင်းငှါအလိုဆန္ဒကိုဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်တွင်, အိုလံပစ် TRADE ကို (တောင်မှ e-mail, အတည်ပြုခြင်းမပါဘဲ) နီးပါးချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ပေးထားပါတယ်။ သငျသညျတစ်မိနစ်အတွင်းမှာဒီပွဲစားနဲ့သရုပ်ပြသို့မဟုတ်အစစ်အမှန်အကောင့်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
သင်တစ်ဦးသရုပ်ပြအကောင့်ပေါ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်ရန်သင့်ပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ 10,000 ကို virtual ဒေါ်လာရှိပါတယ်တဲ့လေ့ကျင့်ရေးအကောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်သင့်ရဲ့အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးဖို့ကြောက်လန့်ဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲသင်၏နှလုံးရဲ့အကြောင်းအရာရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်။
အစစ်အမှန်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကောင့်ကိုမှန်ကန်ပိုက်ဆံဝင်ငွေများအတွက်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကုန်သွယ်ခင်ကဤအကောင့်တစ်ခုသိုက်စေရန်ရှိသည်။ သငျသညျဗီဇာသို့မဟုတ် MasterCard ကိုဥပမာအားဖြင့်ထိုသို့ပြုပါသို့မဟုတ်အခြားပေးချေမှုစနစ်များကိုမှတဆင့်နိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်, အနိမ့်ဆုံးပမာဏကို 10 ဒေါ်လာကနေစတင်သည်။
ကျနော်တို့ပြီးသားတောင်းသည်အတိုင်း, သင်ဘာမျှမအန္တာရာယ်ရှိရာသရုပ်ပြအကောင့်ပေါ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်ရန်သင့်ပါတယ်။ "UP" သို့မဟုတ် "ချ" တစ်ခုခုကို: သင်ကုန်သွယ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနားမလည်ကြဘူးလျှင်, သင်ရိုးရှင်းစွာနှစ်ခုခလုတ်များ၏တဦးတည်းကို click နိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါသင်သည်ကိုယ်မျက်စိနှင့်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုမြင်နိုင်ပါသည်။ သင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးအရာသည်သင်၏ဟန်ချက်လျော့နည်းသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြောက်တယ်ဖြစ်နှငျ့ "ငွေသွင်းငွေထုတ်ငွေပမာဏ" ပြတင်းပေါက်စစ်ဆေးမထားပါနဲ့။ အဘယ်အရာကိုငွေပမာဏကိုသင်တွေ့မြင်နိုင်သလဲ ဒါကအတိအကျသင့်ရဲ့ကနဦးချိန်ခွင်လျှာအားဖြင့်ယုတ်လျော့ထားပါတယ်ပမာဏပါပဲ။ ယခုဇယားမှာကြည့်ရှုပါ။ အဘယျသို့ရှိဖြစ်ပျက်သလဲ? သင် "ချ" ကလစ်ကြလျှင်, သင်ချညွှန်ပြနေတဲ့အနီရောင်မြှားနှင့်အတူတစ်လိုင်းမြင်လိမ့်မည်။ အဆိုပါလိုင်းသင်ဒစ်ဂျစ်တယ် option ကိုဝယ်ယခုအချိန်တွင်စျေးနှုန်းအဆင့်ကိုခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည်။ မြှားကိုသင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ရဲ့အဆုံးမှာစျေးနှုန်းစျေးနှုန်းအဆင့်ထက်နိမ့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားကြောင်းနည်းလမ်းများချညွှန်ပြ။
အခုတော့ရဲ့အချိန်ကိုအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့, သင်ရလဒ်များကိုကြည့်ဖို့စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်အချိန်ကို "ထရေးဒင်းအချိန်" window ထဲမှာညွှန်ပြနေသည်။ သငျသညျဤအချိန်ကိုယ့်ကိုကိုယ် (သင်တို့ကဲ့သို့တစ်ခုတည်းကုန်သွယ်မှုပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်လိုတဲ့ငွေပမာဏကို) ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အောက်ကဇယားနှင့်အပြာလိုင်းပေါ်မှာအပြာရောင်လယ်ကိုလွန်ပြီမည်မျှအချိန်ကိုပြသ။ အချိန်ကိုတက်ဖြစ်တဲ့အခါ, သင့်ပထမဦးဆုံးကုန်သွယ်ရေးကျော်ဖွစျလိမျ့မညျ! ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ငွေပမာဏကိုသင့်ရဲ့ဟန်ချက်ကိုမှပြန်လာသောထားပါတယ်ကြောင့်နောက်ထပ် 80% ကိုလည်းထည့်သွင်းထားပြီးလျှင်, သငျသညျမှာ "ချ" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လက်ျာဆုံးဖြတ်ချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒီဖြစ်ပျက်မပါရှိလျှင်, ထို့နောက်သင့်ရဲ့ခန့်မှန်းချက်မှားယွင်းနေခဲ့သည်။ ပိုပြီးမဟုတ်သလိုလျော့နည်းမ - ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်ကိုသာငွေပမာဏကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
သငျသညျအပြည့်အဝဒစ်ဂျစ်တယ် options များအရောင်းအဝယ်ဖြစ်၏နိယာမကိုနားလည်သဘောပေါက်သည်အထိအနည်းငယ်ပိုပြီးအရောင်းအထားပါ။
သငျသညျယုံကွညျစိတျခခံစားရတဲ့အခါ, သင်သည်သင်၏ပလက်ဖောင်းမှကဲ့သို့သော analytics များအတွက်အနည်းငယ်တူရိယာ, add စေခြင်းငှါ ကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများ ဝစ်ဂျက်သို့မဟုတ် စီးပွားရေးပြက္ခဒိန်။ ဤရွေ့ကားတူရိယာသင်သည်အောင်မြင်မှုဖြစ်နိုင်ခြေတိုးမြှင့်ဖို့ကူညီပေးပါမည်။ "ခန့်မှန်း" သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာမဟုတ်ပါဘူး။
သငျသညျပိုက်ဆံငွေသွင်းခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်အကောင့်အပေါ်ကုန်သွယ်မှုဖို့အဆင်သင့်သောအခါ, အေးဆေးတည်ငြိမ်နေဖို့ကြိုးစားပါ။ နိမ့်ဆုံးပမာဏကိုအမှန်တကယ်အကောင့်ပေါ်တွင်သင်၏ပထမဦးဆုံးကုန်သွယ်ရေးပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက် - 1 မိနစ်နှင့်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှု၏ညှနျကွားကြိုတင်ခန့်မှန်း - $ 30 (သို့မဟုတ်5ရူဘယ်), အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်အချိန်ခန့်ထား၏။ အဆုံးစွန်သောလုပ်ဖို့, သင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာန်ဆောင်မှုများထဲမှအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အခုတော့ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ! ပထမဦးဆုံးကုန်သွယ်ရေးအောင်မြင်သောမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်တောင်ဒါဟာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုပါ! ဂုဏ်ယူပါတယ်, သင်ရုံတစ်ကုန်သည်ဖြစ်လာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွေးချယ်စရာလေ့လာဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီင့်! သင်ပိုမိုယုံကြည်မှုခံစားရသည်တိုင်အောင်, ပိုက်ဆံ၏သေးငယ်တဲ့ပမာဏရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ တစ်ကြိမ်မှာဒေါ်လာစျေးလောင်းကစားအရာအားလုံးဆုံးရှုံးဖို့ကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောဖယ်ရှားပစ်ရရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်။ နှင့်ကုန်သွယ်ကာလအတွက်5မိနစ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုသင့်ရဲ့ခန့်မှန်းပိုင်ခွင့်ဖြစ်လတံ့သောအလေးသာဤနည်းပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြသည်။
သငျသညျ olymptrade အကြောင်းပိုမို Read ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်အဝ updated စစ်ဆေး Olymp trade ပြန်လည်သုံးသပ်
Tags: အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုဘယ်လောက်သေချာဖြစ်ပါသည်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်အတည်ပြုရန်ဖို့ဘယ်လို, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ရဲ့ login, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ဖွင့်လှစ်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ဖွင့်လှစ်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုဖန်တီး, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုသရုပ်ပြအကောင့်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုစျေးကွက်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုနိမ့်ဆုံးသိုက်, အိုလံပစ်အကြှနျုပျ၏အကောင့်ကုန်သွယ်မှု, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်သစ်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုဖွင့်လှစ်အကောင့်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအစစ်အမှန်အကောင့်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုလှည့်ကွက်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှု binary သောသူသည်